Wipster: Dib u Eegista Video iyo Madal Ansixin | Martech Zone
Waxaan la shaqeynaynay saaxiibadeena 12 Xidigood Media (taageerayaasha waqtiga dheer iyo asxaabta!) Fiidiyowga macaamiisha. Waa fiidiyow casri ah, oo ku lug leh intros, outros, b-roll, muuqaal macaamiil ah, iyo wareysiyo dhammaantood lagu soo koobay wax ka badan 2 daqiiqo.
Waxay u soo direen xiriiriye aan ka heli karno fiidiyowga Cadho, barmaamijka dib u eegista iyo ansixinta fiidiyowga. Waa is-dhexgal aad u macquul ah oo daawade kastaa midabkiisu-midabbeysan yahay isla markaana uu ka faalloon karo goob kasta barta uu doono ha ku yaallo waqtiga jadwalka. Interface waxaa ka mid ah jiita iyo hoos u interface si dareen leh u geliyaan oo u maareeyaan fiidiyowyadaada.
Barxadku wuxuu leeyahay liistada la qabanayo halkaas oo faallooyinka si toos ah loogu sameeyo hawlo isla markaana la iska hubin karo. Waxaad sidoo kale soo dejisan kartaa PDF ama daabacan kartaa koobi iyaga ka mid ah, ama iska qor kartaa quudinta dhaqdhaqaaqa. Barxadda ayaa sidoo kale kuu oggolaaneysa inaad abuurto faylal la wadaago iyo isticmaaleyaal la xaqiijiyay si loo xaddido gelitaanka u dhexeeya macaamiisha ama xitaa kuwa lagu casuumay jawaab celinta.
Dib-u-eegis ku ansixiya adoo adeegsanaya Adobe Premiere Pro
Gudiga Dib U Eegista Wipster ee Adobe Ciyaar waxay kuu ogolaaneysaa inaad u dirto tafatirkaaga macaamiisha si aad uhesho jawaab celin adigoon ka tagin qeybta wax ka bedelidaada, halka Wipster uu koodh garayn, soo raro, wadaago isla markaana uu isku duba rido jawaab celinta daaha gadaashiisa. Wada-hawlgalayaashu way daawan karaan sida faallooyinka si otomaatig ah ay ugu muuqdaan inay yihiin calaamado ku qoran Adobe Premiere Pro waqtiga.
Dib-u-eegis iyo Ansixin ku samee moobilka
Haddii taasi aysan sahlaneyn, Wipster waxaa loogu talagalay mobilada si aad si sahal ah dib ugu eegi karto, uga faalloon karto una ogolaan karto fiidiyowga socdaalka, adoo adeegsanaya qalab kasta.
Qiimaha waa mid aad u fudud - kaliya $ 15 halkii isticmaale bishiiba. Waxay qaadataa dhammaan dhowr ilbiriqsi in la bilaabo.
Isku qor 14 maalmood oo bilaash ah Wipster
Tags: adobe premieradobe premiereadobe Ciyaar pronidaamka ansixinta fiidiyowgaiskaashiga fiidiyowgafaallooyinka fiidiyowgadib u eegista fiidiyahatirtir
12 Cashar oo Lagu dabaqay Lahaanshaha Xaddidan ilaa Suuqgeynta